Fiverr - Freelance Services 2.5.7.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.5.7.6 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Fiverr - Freelance Services ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စီးပွားရေးပိုင်ရှင်နာရီဝန်းကျင်အလုပ်လုပ်? စီမံကိန်းပြီးစီးရန်အပြေးအလွှား? ကို on-the-go လုပ်ငန်းရှင်? Fiverr မှဟဲလိုဆင့်ဆိုရမည်မှာ - ဒစ်ဂျစ်တယ်န်ဆောင်မှုများအတွက်အကြီးဆုံးဈေး။ အရည်အသွေးအလွတ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရယူလိုက်ပါနှင့်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်သို့မဟုတ်ကြီးထွားစေရန်လိုအပ်သမျှရှာပါ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးတတ်နိုင်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဈေးကိုအသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးအဖြစ်, Fiverr, အကျင့်ကိုကျင့်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဆက်ခံစတင်ရန်အလွတ်များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ပထဝီ, အချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်မရှိတော့အတားအဆီးများဖြစ်ကြသည်။
ယခု Fiverr မိုဘိုင်း app နှင့်အတူသင်ရှိရာနေပါစေချိတ်ဆက်ရနိုင်သည်, သို့မဟုတ်သင်လုပ်နေလုပ်နေအဘယျသို့။
: 116 ကွဲပြားခြားနားသောဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကနေလွတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှ Choose
•ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, SEO ဆိုသည်မှာ, သင့်အလုပ်အရှိန်မြှင့်ကြောင်းကို virtual လက်ထောက်, လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
• Programming န်ဆောင်မှု, website ကိုဖန်တီး & မိုဘိုင်း app ဖွံ့ဖြိုးရေး, WordPress ကို Bug ကိုပြုပြင်တာတွေ
• Logo ဒီဇိုင်း, ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း, ကို web ဘို့ animations တွေကို & မိုဘိုင်းဗီဒီယိုများ
•ချက်များ, ဘလော့ဂ်နှင့်ဆောင်းပါးအရေးအသား, သတ်ပုံ & တည်းဖြတ်ရေး
• Flyer, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, အသံ-over, & သီချင်းရေး
•စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေး & စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဘဏ္ဍာရေးမဟာဗျူဟာများ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
•သင်လိုအပ်သမျှ - Fiverr ပေါ်မှာများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်!
သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တည်ဆောက်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်လိုအပ်သမျှကိုဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fiverr သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာဖန်တီးမှုန်ဆောင်မှု၏လောကဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေါ် & ဘတ်ဂျက်အောက်မှာကယ်နှုတ်တော်မူ၏သင်၏ပရောဂျက်ကိုရယူပါ။
•သင့်စီမံကိနျးအတှကျစုံလင်သောပွဲစဉ်ကောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရမီလွတ် '' ratings နှင့်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Read
•လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လတ်ဆတ်သောအခွက်တဆယ်ဘို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတစ်ခုအမြဲကြီးထွားလာရေကူးကန်မှ access ကိုရယူလိုက်ပါ။
•သတိထားမိ Get: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဈေး၌သင်တို့၏ထိတွေ့မှုတိုးမြှင့်
•, မိုဘိုင်းရရှိနိုင်မှုနှင့်ပိုမိုအမိန့် Get ဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်ရဲ့အရည်အသွေးတိုးမြှင့်, သင်၏ ratings & တုန့်ပြန်မှုနှုန်းတိုးတက်စေ
သငျသညျ Fiverr ကို download လုပ်သောအခါ, သငျသညျ 11M ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချလွတ်၏ (အစဉ်အဆက်) အကြီးမားဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နေတာပါ။ သင်သည်သင်၏အလုပ်တက်ပြီးအောင်ကူညီနှင့်သင်၏ရန်-do list များအတွက်မထားရန်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ, မည်သူမဆိုငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့အချိန်ဇုန် (သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ကြီး) တွင်နေထိုင်နေ?
တကဆုကြေးငွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ! သငျသညျအိပျပျြော (သို့မဟုတ် Vice-နျအလှနျ) နေသင်သည်သင်၏စီမံကိန်းပေးပို့သံသရာတို, စီမံကိန်းများလက်မှတ်ထိုးဖို့သြစတြေးလျနှင့်ဥရောပတိုက်တွင်အလွတ်ရနိုင်။
•ထုတ်ခဲ့ရှာဖွေစွမ်းရည်: ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှ 120 ကွဲပြားခြားနားသောဖန်တီးမှုဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကနေအသည်းအသန်ဖန်တီးမှုလွတ် Choose
• Push ကိုအသိပေးချက်များကိုသင်စီမံကိန်းများ၏ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့သေချာအောင်
သငျသညျကို on-the-သွားလာရင်းနေ• Inbox ထဲမှာအကြောင်းကြားစာများဘောလုံးကိုပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်စေ
ဝယ်လက် & ရောင်းသူအကြား• 24/7/365 ဆက်သွယ်ရေး
•ထူးခြားသောမိုဘိုင်း-သာ website တွင်မတွေ့ရှိ Features,
"။ ကိုဒီ app ကိုသင်လိုဂိုဒီဇိုင်းနှင့်ဂီတဖွဲ့စည်းမှုမှစတိုင်ညှိနှိုင်းဖို့, Fiverr အပေါ်ဖော်ပြထားသော gigs ၏သန်းပေါင်းများစွာ browse ခွင့်ပြု ကို" - The Next Web
" ကိုသငျသညျမြျှောလငျ့မယ်လို့သကဲ့သို့, Fiverr App ကိုမကျြစိကိုအပေါ်လွယ်ကူပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူအသီးအသီးစာရင်းတွင်ရောင်းချလျက်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ခွင့်ပြု၏ပုံရိပ်ယောင်အပေါ်တစ်ဦးလေးလံအလေးပေးရှိတယ် ကို။ "- TUAW
ပါရမီလွတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ Gigs သန်းပေါင်းများစွာ။ 24/7/365 ။
ယခု Download လုပ် & ပိုမိုလုပ်ဆောင်!
Facebook ပေါ်မှာ Fiverr လိုပဲ:
Fiverr - Freelance Services အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Fiverr - Freelance Services အား အခ်က္ျပပါ
smurphstore စတိုး 92 36.36k
APK အေၾကာင္း Fiverr - Freelance Services အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.5.7.6
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.fiverr.com/privacy-policy
App Name: Fiverr - Freelance Services
Release date: 2019-07-19 17:46:43
လက်မှတ် SHA1: 0D:FE:67:A6:EB:B1:BB:F4:C8:FB:07:3E:88:A4:70:43:C6:53:68:BE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Fiverr Android
အဖွဲ့အစည်း (O): Fiverr
နယ်မြေ (L): DroidCity
နိုင်ငံ (C): F5
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): DroidLand
Fiverr - Freelance Services APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ